Merry Kisimusi kunemi mose!|TheOne
Merry Kisimusi kunemi mose!
Chekutanga, Merry Kisimusi kunemi mose!
Sezvo ndakanzwa kuti mutambo uyu, chakavanzika cheKisimusi sekuru chakakosha, vangave vana kana vakuru, vane chiono chakanaka cheGore Idzva.Tariro kutarisira Krisimasi sekuru kuunza zvipo kwavari, kuunza rombo rakanaka muGore Idzva, zvakare kwatiri, kwete chete tariro yokuti hupenyu huri nani uye huri nani, shandai kubudirira uye bonanza.Uye mumhuri YEMUMWE munogara mune munhu mumwe chete anopa chiedza nekupisa kwatiri tose.Akaita sechiedza chetariro nesimba!
Ndinofunga unogona kufungidzira nekuona mifananidzo.Hongu, akatigadzirira zvinoshamisa pachine nguva paKisimusi.Iri bhokisi rakafanana nebhokisi repfuma, rakazadzwa kwete chete nezvokudya zvedu zvatinoda, asiwo nezvido zvedu zvakanakisisa uye tarisiro yedu yakanaka yeGore Idzva.Ndinotenda kuti nekuedza kwakabatana, zvese zvishuwo zva2022 zvichazadzika!
Ndinovimba zvakare kuti mutungamiri wedu anga achiburitsa mwenje wake nekudziya, akwezva hama nehanzvadzi dzakawanda, wedzera timu yedu, zvakare dai kambani yedu iri kuita zvirinani uye zvirinani!Kutenda kune vese vatengi nerutsigiro rwavo uye kambani.Ndatenda!
Nguva yekutumira: Zvita-21-2021